Dugsiga Shaafici Boosaaso oo xalay guuleystay iyo Azhar oo bar bar dhac la galay Nawaawi Garoowe – Radio Daljir
Dugsiga Shaafici Boosaaso oo xalay guuleystay iyo Azhar oo bar bar dhac la galay Nawaawi Garoowe
Luulyo 27, 2013 4:43 b 0
Boosaso, july 27, 2013 – Tartan iyo Tacliin oo ku jira wareega labaad ee barnaamijka ayaa waxaa xalay tartan uu ku dhexmaray afar dugsi sare oo ka dhisan Puntland, tartanka ayaa ku jira wareega labaad oo dugsigii laga badiyaa tartanka uu ka harayo.
Qaybtii hore ayaa waxaa ku tartamay dugsiyada kala ah Axmed Garaad oo ka dhisan degmada Waaciye iyo Shaafici Bosaaso, labada dugsi ayaa soo bandhigay aqoon iyo asluub aad u heer sareeyey intii tartanka uu socday.
Natiijada tartanka ayaa gabagabadii kusoo dhamaatay dugsiga Shaafici Bosaaso oo la yimid kow iyo toban? darajo iyo Axmed Garaar Waaciye oo helay sideed darajo , sidaasi ay guushu ay ugu raacday dugsiga Shaafici Bosaaso una soo baxay wareega sadexaad.
Qaybtii labaad ayaa waxaa tartan uu ku dhexmaray Al-azhar Shariif Qardho iyo Nawaawi Garoowe.
Tartanka ayaa kusoo dhamaaday barbar dhac ama bareejo iyadoo labada Dusgi ay la yimaadeen midkiiba 11 derajo, taasi oo ka dhigan in ay natiijo isku mid ah ka heleen kulankii xalay dhexmaray .
Caawa waxaa tartanka uu dhex marayaa dugsiyada kala ah ?Cumar Samatar Gaalkacyo iyo Sheekh Cismaan Qardho, sidoo kale waxaana iyana caawa tartamaya C/laahi Ibraahim Ufayn iyo Dangoroyo School.
USA iyo Ethopia oo Is-kaashi buuxa ka samayey ka shaqeynta amaanka dalalka Qaarada Afrika
Baaris qoto-dheer oo lagu bilaabay Gaari maanta isku qarxiyey is-goyska Sanca ee xamar (Dhegeyso)